14 Lipsticks Na-adịghị Na-apụ: The Ultimate Roundup - Mma
Lipsti na-anaghị apụ (Tụkwasị Anyị Obi, Anyị Gbalịrị Ha)
Lipsticks That Don T Come Off Trust Us
Nye chọrọ ịtinye lipstick kwa minit 30 ọ bụla? Ọ bụghị anyị. Nke bụ ya mere anyị ji gara ịchụ nta maka egbugbere ọnụ lipstick kachasị mma na-adịte aka nke na-adịghị agbanwe agbanwe n'ụzọ nkịtị (n'agbanyeghị ole S'Well kalama jupụtara, ụbọchị nri ehihie na oge obi ụtọ spritzes anyị na-etinye ya). Site na obere-ihe nrịbama na mmiri mmiri, ebe a bụ usoro 14 nke na-anọ ebe ị na-etinye ha.
Njikọ: Agba Lipstick Should Kwesịrị Trygbalị, Dịka akara Zodiac gị si dị
1. Giorgio Armani egbugbere ọnụ Liquid lipstick
Nke a bụ mmiri mmiri lipstick maka ndị kpọrọ asị asị lipstick. Ugboro anọ dị nro karịa ngwaahịa egbugbere ọnụ ọdịnala, usoro ahụ enweghị ibu, enweghị akaebe na ultra-matte. Ma echegbula, agba ya dị okpukpu abụọ ka ukwuu n'ihi usoro izizi nke nwayọ na-agbanwe agbanwe nke na-enye ohere ka pigments gbasie ike mgbe ị na-ehicha. Na-atụ anya ihe dị ka elekere asatọ nke ejiji site na otu swipe, na-enweghị nke ọ bụla nke akọrọ, mmetụta na-adịghị mma.
na-a juiceụ ihe ọ sugarụ sugarụ sugarcane na afọ efu
2. Bite Mma Outburst Longwear egbugbere ọnụ Unyi
Teknụzụ egbugbere ọnụ, nke a na-eyi ihe dị ka egbugbere ọnụ n'ihi ekele ya na-enweghị atụ. Onye nchịkọta akụkọ anyị mara mma na-a sweụ iyi site na usoro Mma a maka ịdị ọcha, hydrating Efrata dị ka mmanụ ọkụ (nke na-azụlite egbugbere ọnụ na vitamin A na C), mmanụ oyibo (akara mmiri na mmiri) na wax sunflower mkpụrụ wax (akpọchi na ndò na-adịghị ike, ụbọchị niile) ogologo). Na mgbakwunye, ihe ntinye osisi dị mfe iji, yabụ na ị gaghị etinye ihe ọghọm n'echeghị eche n'egbugbere ọnụ gị.
Zụta ya ($ 24)
3. Fenty Mma Stunna egbugbere ọnụ Agba Longwear Fluid egbugbere ọnụ Agba
Na ihe karịrị 4,000 nyocha dị mma na Sephora naanị, agba egbugbere ọnụ ọkacha mmasị nke Rihanna na-adị ndụ na hype niile. Ọ na-etu ọnụ na-enweghị isi, ogologo ejiji oge niile na ngwugwu dị nro na-adịgide. Ga-ahụ ndo sitere na uhie zuru oke zuru ụwa ọnụ ( Na-enyochaghị ) na miri emi, sultry-acha odo odo ( Enweghi mmeri ) na ọbụna a super edgy, ezigbo nwa ( Akpọghị ). Ọ bụghị naanị na ndò niile na-atụgharị isi, a na-emekwa ha iji mee ka akpụkpọ anụ niile dị mma. Ka anyị nụrụ ya maka Riri!
4. Nars Powermatte egbugbere ọnụ ink
Ihe nzuzo nke lipstick matte nke anaghị flake ma ọ bụ mgbape? Usoro nke na-emegharị egbugbere ọnụ gị kama ịnọdụ n'elu ha. Ihe a na-eme ka mmiri na-egbu mmiri nwere mmetụta na-enweghị isi na njigide na-agbanwe agbanwe, n'ihi ya, ọ dị mma dị ka iyi ihe ọ bụla. Cha na-aga n'ihu na-agbachi agbachi ma na-ekpochi egbugbere ọnụ mgbe akọrọ, na -emepụta ihe ngosi smudge na ị gaghị eche echiche ugboro abụọ. Nothapụ ikwusi onye na-etinye ihe mgbakwasị ụkwụ na-eme ngwa ngwa, na-eme ka ịkwụ ụgwọ na-enweghị isi.
Zụta ya ($ 26)
5. Colourpop Ultra Matte egbugbere ọnụ
Ekpela ikpebi egbugbere ọnụ site na ọnụahịa ya. Ihe ngosi $ 7 a kachasi nma bu ihe akaebe na ihe di nma na-adighi ike. Site na nke dị gịrịgịrị, na-adị nro dị nro ruo n’ọkpụkpụ agba agba, lipstick a nke a na-akpọ ultra-matte bụ ụdị onye nchịkọta akụkọ anyị na-aga-maka ihe kpatara ya. Ọ na-eji ya byụọ iyi na nhọrọ ọ bụla ọzọ dị oke ọnụ ma hụkwa n'anya etu esi ese ya (ruo mgbe ebighi ebi). Site na teknụzụ na-egosi mbufe, ọ na-esiri ya ike iso ya rụọ ụka.
Zụta ya ($ 7)
6. Stila Nọrọ Lipstick Liquid ụbọchị niile
Anyị na-eto Stila's ịnọ ụbọchị niile Liquid Lipstick dị ka anyị na-eme ya Eyeliner, n'ihi na ọ na-eme n'ezie ihe ọ na-ekwu. Oge gboo a na-agbaso egbugbere ọnụ maka oge marathon nke 12 ka ị na-enye hydration (ekele maka vitamin E na ube oyibo) iji mee ka onye na-esusu ọnụ gị ghara inwe nkụda mmụọ.
mmega kacha mma maka abụba afọ
Ọ bụrụ na anyị ga-etinye lipstick amethyst, anyị chọrọ ka ọ nọrọ. Standbylọ ahịa ahịa ọgwụ a na-eme nke ahụ. Dị ka aha ya na-egosi, ube oyibo mmanụ- na vitamin E-nye concoction na-aga na velvety adụ site na mbụ swipe. Gaa n'ihu, drinkụọ La Croix niile ịchọrọ, n'ihi na ọ bụkwa mmiri na-enweghị mmiri. Ọ bụghị nnukwu odo odo na-acha odo odo? Nke a na Liquid Suede Cream na-abata na ndo ndị ọzọ, gụnyere mauve, ịgba ọtọ na ọbụna pink.
8. Dose nke Agba Liquid Matte Lipstick
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-ahọrọ ịnwe ọtụtụ nhọrọ, lee anya na nke a-nke gụnyere nnukwu mkpuchi 34. Ma ị na-ahọrọ pink ma ọ bụ aja aja miri emi, ọ na-emetụta ude na mbụ wee dọọ na glate na-egbuke egbuke nke na-enwu dị ka nku. Ga-achọ iyi ya ụbọchị niile, anyị kwere nkwa.
9. Chanel Rouge Allure ink Liquid Lipstick
N'ikpeazụ, ụfọdụ Chanel anyị nwere ike (ihe fọrọ nke nta) imeli. Nke a na-amị amị nke ọma dị ka egbugbere ọnụ na-egbukepụ egbukepụ ma na-ahapụ nke ọ bụla n'ime mkpịsị aka. Ozugbo ọ kpọnwụrụ, ọ na-ewepụta ụdị ọmarịcha ọdịdị nke na-enwu gbaa mana ọ naghị ewe iwe. Ihe otiti nke polymer (ijide agba na egbugbere ọnụ), waxes, mmanụ osisi na-edozi ahụ ma na-echebe antioxidants, ọ dị ka nlekọta anụ ahụ maka egbugbere ọnụ gị. Nke a bụ Parisian-chic tube zuru oke ọnụahịa ọnụahịa (ọbụlagodi n'uche anyị).
10. Smashbox Na-ete mmiri mmiri mmiri mgbe niile
Ihe kachasị amasị anyị banyere eriri lipstick a? Ọ na-abịa n'ụdị textures na-adịgide adịgide (site na matte na ọla), nke nwere ike idozi maka ọdịdị zuru oke. Gwakọta ma kwekọọ otu ị chọrọ, n'ihi na Advanced Polymer Technology na-edobe lipstick a ebe ọ bụla ị chọrọ ya-enweghị nku na anya.
gịnị mere ịlụ di na nwunye
11. Kat Von D Ebighị Ebi Liquid lipstick
Na ọtụtụ lipstick si n'ụwa, reviews pụtara ihe niile. Nke a nwere ihe na-enye obi ụtọ 14,000 na Sephora. Ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ya: ude na ude na-acha uhie uhie na-awagharị dị ka gloss, mana akpọnwụ ka ọ bụrụ ihe na-agbanwe agbanwe na matte-na-enweghị skimping na-edozi ihe ndị na-edozi ahụ. na-eme ka mmetụta gị na-adị ume ogologo ụbọchị dum. Ọzọkwa, ọ bụ onye ama ama ama ama mere ya… ezu kwuru.
Zụta ya ($ 20)
12. Anụ ji nganga anụ ahụ Matte Liquid Lipcolor
Ọ bụrụ n'ịchọrọ egbugbere ọnụ gị na-enweghị parabens ma ọ bụ talc, usoro a bụ nke gị. Ọ na-aga na super creamy na nkwafu (kpọrọ ihe, ị gaghị enwe ike ịnwe ya) thanks to super flex polymers. Ọ dries na njedebe na-enweghị ọkụ nke nwekwara ike igbochi egbugbere ọnụ mmiri site AM ruo PM. Ma ọ gaghị etolite, ọbụlagodi na ị na-abanye n'oké osimiri wee chụọ ya na gburugburu margaritas nke oké osimiri.
13. Maybelline New York Super Miri Matte ink egbugbere ọnụ Agba
Anyị ga-adị njikere itinye nzọ na usoro a dị ka ụlọ ahịa ọgwụ kachasị mma na-adịte aka. Ọ na-agba agba, ọ dị mma na ọ na-akpọchi egbugbere ọnụ maka iyi uwe ụbọchị niile, n'agbanyeghị ole azụ Azụ Swedish ị na-eri nri na tebụl gị. Ihe pụrụ iche, nke a na-ahụ anya na-etinye aka na-emekwa ka ọ dị oke mfe ịmepụta ahịrị egbugbere ọnụ akọwapụtara na-adabereghị na pensụl egbugbere ọnụ.
14. TPSY Dash egbugbere ọnụ welara
Chefuo ihe ị maara banyere ụdị di na nwunye, n'ihi na egbugbere ọnụ a na-eche dị ka ị na-eyighị ihe ọ bụla na egbugbere ọnụ gị. Mmiri mmiri ahụ na-aga n'ihu ma kpọnwụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, na-ahapụ nsusu ọnụ nke okike, agba agba nke na-agaghị ada ma ọ bụ nku. Debe ihe mkpuchi egbugbere ọnụ ma ọ bụ na-egbuke egbuke dị n'elu, dị ka ị ga-eme na egbugbere ọnụ efu, ọ gaghị emetụta agba ma ọ bụ imecha. Anyị na-achọ iche banyere ya dịka obere mmezi ga - enwerịrị maka ụbọchị ndị ahụ adịghị etemeete.
Njikọ: OMG-We Can Now All Afford a Little Gucci with Ndị A $ 38 Lipsticks
egwuregwu kacha mma maka leo
esi ewepu ntutu kpamkpam na ihu
esi ewepu ntutu ihu ihu kpamkpam na ụlọ
esi belata afo site na mgbatị
esi belata ntutu ihu